तिलोत्तमाले असारमा विकास निर्माणको भुक्तानी नदिने – Rajdhani Daily
तिलोत्तमाले असारमा विकास निर्माणको भुक्तानी नदिने
बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले असारमा विकास निर्माणको भुक्तानी नदिने भएको छ । ‘असारे विकास’ रोक्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले असारमा विकास निर्माणको भुक्तानी नदिने निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार गरिने विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय नहुने ठहरसहित यस्तो निर्णय गरिएको नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए ।
कार्यपालिका बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गत साउनमै गरेको हो । साउन २० गतेको ३८ औं नगर कार्यपालिकाको निर्णयमा भनिएको छ–‘चालु आ.व.को बजेट अनुसारका योजना २०७६ जेठ मसान्त भित्र सम्पन्न गरी योजनाको भुक्तानी समेत सोही मिति भित्र लिने व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्बन्धित वडामा रहेका योजनाहरु यथासमयमा नै सम्झौता गरी कार्यान्वयनको सुरुवात गर्ने निर्णय गरियो । यो व्यवस्थाबाट ०७६ आषाढ १ गते देखि कुनै पनि योजनाको भुक्तानी सो आर्थिक वर्षमा नदिने निर्णय गरियो ।’
‘विकास निर्माणका कामको चेक जेठ मसान्तसम्म मात्र काट्ने निर्णय भएको छ । असार १ पछि विकास बजेटको चेक नकाट्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले भने ।
नगरपालिकामा हालसम्म २७० वटा विकास योजनाको सम्झौता भैसकेको छ । त्यसमध्ये ५२ वटा योजनाको काम सम्पन्न भएर भुक्तानी भैसकेको योजना शाखाले जनाएको छ ।
सम्झौता भएका योजनाहरुको बजेट १४ करोड ७० लाख ६१ हजार रुपैंयाँ छ । नगरपालिकाले ठुला योजनाको कार्यान्वयन ठेक्का प्रक्रियाबाट गराएको छ । यो वर्ष क्रमागत योजनाको रुपमा रहेका भ्यूटावर, प्रमुख प्रशासनिक भवन, अतिथि गृह, सभाहल निर्माणको क्रममा रहेका छन् । यस्तै पाँच वटा वडा कार्यालय भवन, वडा नं. ७ मा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन, वडा नं. १० कान्छीबजारमा खेलकुद मैदान, ड्राईभरटोल–डिङगरनगर कालोपत्रे, विभिन्न वडामा सडक मर्मत, ट्रान्सफर्मर खरिदलगायतका योजनाहरु पनि चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।
गुल्मीमा दुर्घटनासम्बन्धी डरलाग्दो तथ्य, ८ बर्षमा २४१ दुर्घटना : १५२ जनाको मृत्यु, ३८७ गम्भिर घाइते
गुल्मी । गुल्मीमा सवारी दुर्घटना सम्बन्धी डरलाग्दो तथ्य फेला परेको छ । जिल्लामा सवारीको चाप बढेसँगै दुर्घटना हुने दर र मानिसको मृत्यु सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको हो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरीको विगत आठ बर्ष अ...
३ दिनसम्म सनाखत नभएपछि उपमहानगरपालिकाद्धारा बच्चा र आमाको सतगत
तुलसीपुर । नवजात शिशुसहित मृत अवस्थामा फेला परेकी महिलाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सतगत गरेको छ । बच्चा र आमाको शव भेटिएको तीन दिनसम्म सनाखत नभएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले सतगतका लागि तुलसीप...